Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo nolosha lagu qabtay + magacyada | Warkii.com
Home warkii Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo nolosha lagu qabtay + magacyada
Dowladda Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixisay howl-gallo ciidamada Xoogga ay ka fuliyeen gobollada Shabeelooyinka iyo Hiiraan.
War ka soo baxay taliska ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa waxaa lagu sheegay in howl-galladaas oo ahaa kuwa qorsheysan laga sameeyey deegaano iyo degmooyinka hoostaga gobolladaasi, islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey Al-Shabaab.
Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in howl-galladaasi lagu bur-buriyey saldhigyo ay la haayeen Al-Shabaab, laguna soo qabtay saraakiil ka tirsan kooxdadaasi.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay magacyada raggaas oo kala ah: madaxa maaliyadda gobolka Hiiraan Xasan Yuusuf Cali, madaxa maktabka waxbarashada dumarka ee deegaanka Ceel cade oo lagu magacaabo Cali Cabdulle Jilacow & madaxa Zakawaadka ee gobollada Shabeelooyinka Cabdullahi isxaaq Xuseen.
Dhinaca kale labo xidigle Maxamed Saleebaan oo ah taliyaha ururka 4-aad ee ciidamada Danab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka uu ahaa sidii looga adkan lahaa Al-Shabaab, wuxuuna intaasi ku dara inay sii wadi doonaan dhaq-dhaqaaqyadooda.
Muddooyinkii u dambeeyey ciidamada huwanta ayaa sare u qaaday howl-gallada iyo dhaq-dhaqaaqyada milatari ee ay ka wadaan koonfurta & bartamaha dalka.
Previous articleXukuumadda Jabuuti oo war ka soo saartay dagaalka gobolka Tigray
Next articleHub loogu talo-galay Galmudug oo loo weeciyay Gedo
Mareykanka oo war deg deg ah kasoo saaray dagaalka ka socda...
Dowladda Mareykanka ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, kaasi oo u dhaxeeya...
Sarkaal ka tirsanaa hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da oo lagu dilay...